07 | May | 2018 | Danya Wadi
By danyawadi May 7, 2018 Leaveacomment
“ကာချုပ်ကြီးကိုပြန်ရှခဲ့သောအသွားနှစ်ဖက်နှင့်ဓား” ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့တွေကကာချုပ်ကြီးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေပုံတွေကိုကြည့်ရတာ မြန်မာနိုင်ငံကို(တစ်နည်းအားဖြင့်)ကာချုပ်ကြီးကို သံသယအရမ်းဝင်နေတာတွေ့ရတယ်.. လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးက စွပ်စွဲနေတဲ့ပြသနာဟာလူမျိုးတစ်မျိုးကို လူမျိုးရေးဘာသာရေးအမုန်းတရားတွေနဲ့သတ်ဖြတ် ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာက ယူဆနေကြတဲ့ပြသနာပါပဲ..ဒီလိုယူဆချက်မျိုးဟာ အခန့်မသင့်ရင်နိုင်ငံတကာစစ်အင်အားနဲ့ အနှိမ်နင်းခံရနိုင်ပြီးတိုင်းပြည်ပျက်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ.. အနာဂါတ်မှာသင်ခန်းစာယူလို့ရအောင် အပြုသဘောနဲ့ထောက်ပြရရင်တော့.. လူမျိုးရေးဘာသာရေးအမုန်းတရားနဲ့တမင်လုပ် ခဲ့တယ်လို့သူတို့ယူဆနေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ တပ်မတော်ကိုလက်ညိုးထိုးစွပ်စွဲနေကြတဲ့ ပထမအချက်အကြောင်းရင်းက ကာချုပ်ကြီးပြောလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးဘာသာကာကွယ် ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ပါပဲ.. လူမျိုး၁၃၅မျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံသားသန်းငါးဆယ်လုံးနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအသီးသီးကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာလေးမျိုးစလုံးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမဲ့ကာချုပ်ကြီးက အမျိုးဘာသာကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးမကြာခဏ ပြောခဲ့တာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲ ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်ပြီး တစ်ခြားဘာသာတွေကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အမြင် သူတို့မြင်ခဲ့ကြပုံရှိပါတယ်.. သူတို့မယုံကြတဲ့ဒုတိယအချက်က၂၀၀၈ခြေဥအရ တပ်မတော်ဟာအစိုးရခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ မရှိကြောင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးသိပါတယ်.. ပိုပြီးသေချာစေတဲ့အချက်ကဘင်ဂါလီအရေး မတိုင်ခင်မှာ(ယုံကြည်ထိုက်သူမဟုတ်လို့) အစိုးရကအတွေ့မခံတဲ့ရခိုင်ပါတီကဦးအေးမောင်ကို ကာချုပ်ကြီးက နေပြည်တော်စစ်ရုံးထဲမှာ လှိုက်လှဲစွာလက်ခံတွေ့ဆုံပြခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ.. အခုကျမှတပ်မတော်ကအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု အောက်မှာလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတာပါဆိုတော့ ကျန်တဲ့ရှင်းပြသမျှအမှန်တရားတွေကိုတောင် သံသယဝင်နေတော့တဲ့ပုံရှိပါတယ်.. တစ်ခြားဘာသာတစ်ခုကိုအမုန်းတရားနဲ့နှိမ်နင်းခဲ့ တယ်လို့သူတို့ယူဆနေတဲ့တတိယအချက်က အင်ဒင်းရွာလူသတ်မှုပါပဲ.. ဘင်ဂါလီအကြမ်းဖတ်သမားတွေကိုတပ်မတော်က ထိုးစစ်မဆင်ခင်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက ဥပဒေဘောင်အတွင်းကတိုက်ခိုက်ကြဖို့ ကြိုသတိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်.. ကာချုပ်ကြီးကတော့ထိုးစစ်မဆင်ခင်မှာ အဲ့ဒီလိုကြိုသတိပေးတာမျိုး မီဒီယာပေါ်မှာတော့မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ပြသနာတွေပေါ်လာပြီးအရေးယူရတော့မဲ့အချိန်မှ ကာချုပ်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းတွေမှာ […]
Dhaka, May6(UNB) – Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday said Myanmar should take lessons from Bangladesh on runningacountry keeping communal harmony unharmed. “I think Myanmar should take lessons how to runacountry by keeping religious harmony intact,” she said. The Prime Minister was addressingaviews-exchange meeting with Buddhist religious […]
ဒက္ကာ၊ မေ ၇ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူ့အသိုက်အ၀န်းနှင့် ထိခိုက်မှုမရှိပဲ သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မှ သင်္ခဏ်းစာများကို ယူသင့်သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ ရှိက် ဟာဆီနာက တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအခြေစိုက် DhakaTribune သတင်းဌာနမှ သတင်းတစ်ပုဒ်တွင်ရေးသားထားသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒက္ကာမြို့ရှိ ဃာနာဘာဘန်အဆောက်အအုံတွင်ပြုလုပ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်များနှင့် ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာဝယ် မစ္စ ဟာဆီနာက ယခုကဲ့သို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူမဆို သူမွေးဖွားရာဇာတိမြေပေါ်ဝယ် ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများရှိကြောင်းကိုလည်း မစ္စ ဟာဆီနာကပြောသည်။ “အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။ ပြီးတော့ကာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဆီက အထောက်အပံ့တွေကိုလဲ ရဖို့လိုတယ်”ဟုလည်း မစ္စ ဟာဆီနာကပြောပါသေးသည်။ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအချက်များကိုအခြေခံ၍ သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်း မိမိတို့အစိုးရက သေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းသူကပြောသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနေဖြင့် […]
မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒေသတွေမှာ စနစ်တကျ နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ မြန်မာ့တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ပြောဆိုချက်ကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေကို အခြေချဖို့နေရာသတ်မှတ်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ ထားရှိမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းတရပ်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေဆုံစဉ်မှာ ဒုက္ခသည်များပြန်လာတဲ့အခါ သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ ဘယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲလုိ့ ပီရူးနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်က မေးမြန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ စနေနေ့က တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဒုက္ခသည်တွေကို ဘင်္ဂလီတွေလို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုခဲ့သလို ဒုက္ခသည်တွေပြောဆိုတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုများ […]